musha»Cryptocurrencies Trading Libertex
Crypto zvokutengeserana chete kombiyuta
Sarudza pakati Bitcoin CFD uye zvakasiyana-siyana Altcoins CFD. zvishandiso izvi kunoderedza kuti brokerage yechikoro nokuda 50%. Tanga wokutengesera navo ikozvino.
Digital mari zvinogona kushandiswa kubhadhara zvinhu uye mabasa avo kuvafarira. Vanogona vakatsinhanisa kuburikidza rinokosha mukutsinhana chinyakare dzeEurope.
wakabudiswa: System vanozvishandisa vanoshandisa kadambari vanokwanisa yavo zvokushandisa kwerunyararo ezvinhu oparesheni (kuchera). The anobuda ari decentralized uye parinoperera vhorumu uye nguva, kwokupedzisira inzwi algorithmically parinoperera 21 miriyoni. The Bitcoin mutengo emuchina inobva chivimbo mavari, zvinonzi akaumba chete nokuda ukama pakati zvitengeswa uye kudiwa. The Hurongwa haana muviri nechepakati kuti aigona kudzora anobuda, simba uye kubvuma mwero, kana kuti zvimwe kubhadhara muna Bitcoin. saka, kukosha chairo Bitcoin kunobva simba ari pose uwandu kwenhumbi uye mabasa unogona kutenga nokuti.
Bitcoin Cash, kana bch, ndiyo zvakasiyana siyana Bitcoin (BTC). On August 1, 2017, Bitcoin akanga huviri mari pashure nharo-gore maviri. Bitcoin Cash akauya pamusoro somugumisiro nharo pakati Bitcoin miners’ nemunharaunda pamusoro scalability currency. Sezvo Bitcoin Cash ari musiyano pakati Bitcoin, ani naani ane BitCoins vachava chete nhamba Bitcoin Cash vezvikwata kana zvimwe zvinhu vari akasangana. Bitcoin Cash ari decentralized mari wakabudiswa vamwe vanoshandisa vane zvakakwana Hardware uye Software pfuma kuvatsigira. The bitcoin mari zvazvingava kunobva zvachose zvitengeswa uye kudiwa. kukosha kwayo chaiwo vagara vandifungira yaipedzerwa zvinhu uye mabasa kuti unogona kutenga Bitcoin Cash.
Bitcoin – ari cryptocurrency chairema kuripwa ezvinhu chete zita. Mukati ino mubhadharo maitiro, yeGmail.END_STRONG zvirongwa kumhanya pamakombiyuta akawanda vari interconnected mune vezera-to-vezera Network, nerimwe raiva pedyo nebundu seakafanana uye kuzvipira zvakakwana. Hazvibviri kutarisira kuti hurongwa paruzhinji kana muchivande, kusanganisira kuchinja uwandu BitCoins. Bitcoin ari kumusoro kwokudiwa nhasi. Inogona vakatsinhanisa nokuda Fiat mari kuburikidza anokosha exchanges kana kushandiswa zvakananga senzira mubhadharo. Bitcoin vabvuma vazhinji kupfuura kuzvitoro paIndaneti uye mabasa paIndaneti. The Pricing of cryptocurrency zvichienzaniswa kwakajairika Fiat mari haisi nokudzorwa chero simba uye zvinoenderana zvepanyama vade uye zvakasikirwa kupa.
Exhibitors: Users wegadziriro kushandisa kadambari simba ravo midziyo kuramba nemamiriro (kuchera). The goho riri decentralized uye mapfumo.
Mutengo kufamba Bitcoin hwakavakirwa chivimbo pachayo uye aumbwa chete nokuda pakuenzanisa kudiwa uye zvitengeswa. In kusavapo simba nechepakati kuti aigona kudzora nyaya kana kukanganisa Gengi uye kubvuma kana hake vamwe kugamuchira mari mu Bitcoin, kukosha chairo Bitcoin inobvawo pane simba rinomutsa ari pose uwandu kwenhumbi uye mabasa kuti kuwanikwa vakatenga.
Bitcoin goridhe (BTG / USD)
Bitcoin goridhe BTG / USD ari mumwe cryptocurrency itsva inobva Bitcoin blockchain. Bitcoin Gold nderimwe bitcoin zvakaoma forogo kuti vaitevera Bitcoin Cash. It akasikwa Jack Liao, ari CEO mheni ASIC, Hong Kong anotsanangura digitaalinen yesimbi kambani imwe mugodhi. The Bitcoin forogo zvakaoma kuti kwakatungamirira kushanda Bitcoin Cash uye Bitcoin Gold akatora nzvimbo musi October 24, 2017. On November 12, 2017, Bitcoin Gold Mining yakaitwa pachena, apo Zvidhinha itsva vakawedzerwa Blockchain. sezvaitarisirwa, ari blockchain kusunungurwa akatimutsa kufarira. Kunyange mazuva maviri asati kusunungurwa, mutengo akasimuka yekudyidzana uye ukasvika $ 500. Bitcoin Gold ndehwokuti kuva nani-digital goridhe pane dzose BTC. The Developers kuda kuita izvi kuburikidza nekugadzirisa dambudziko mugodhi centralization kuburikidza uchapupu-of-basa algorithm (P-O-W).
Bch / BTC chiratidzo kuratidza mutengo Bitcoin Cash (bch) pamusoro Bitcoin (BTC), kupfuura mukurumbira cryptocurrency kunze uko, i.e. zvakadini Bitcoin unofanira kutenga chimwe Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, kana bch, ndiyo zvakasiyana siyana, kana forogo, pamusoro Bitcoin (BTC). The forogo akasikwa musi Aug 1, 2017, pashure ane zvisingagadziriswi nharo iri miners’ vemunharaunda chokuita Bitcoin scaling. Bitcoin (BTC) ari munhu mari chikwata kushandiswa mukati muripo hurongwa pamwe chete zita. In Bitcoin zvakatipoteredza, vatengi Software anomhanya pamakombiyuta akawanda achishanda pamwe chete mukati rimwe kuda-to-vezera Network, izvo zvinoreva ose raiva pedyo nebundu rimwe network iri akazvimirira uye kuzvipira zvakakwana. BTC ari decentralized mari wakabudiswa vamwe vanoshandisa vane zvakakwana Hardware uye Software pfuma kuhutsigira. Bch / BTC zvazvingava kunobva zvachose romugove uye kudiwa. Bch / BTC mutengo iri pakutsvaga vakawanda Bitcoin uye Bitcoin Cash, ayo forogo.
Nokuputsanya haisi imwe digitaalinen mari, asiwo muripo gadziriro iri zvachose decentralized. Nokuputsanya rakaumbwa 2014 uye zita raro rakachinjwa katatu, kare sezvo Xcoin uye Darkcoin. The kugumbusa zvemichina chakavakirwa Bitcoin ruzivo, asi anewo yayo nemamwe zvinhu. Nokuputsanya zviri pakati pamusoro 10 cryptocurrencies kubudikidza musika capitalization. havaoni Its vane chinzvimbo tarisiro uye takatsunga kusika digital mari kukwikwidzana Bitcoin, piyona of cryptocurrency. Nokuputsanya zviri wakabudiswa vanoshandisa vanoshandisa dzavo midziyo vanokwanisa kutsigira hurongwa uye kuderedza itsva mari inokwana. Akadzika nokuputsanya chose decentralized. The kunonyanyisa nhamba Mari wakabudiswa iri 22 miriyoni. zvisinei, Zvinotarisirwa kuti chete 16M kana 18M mari chichange wakabudiswa ramangwana. Aichinja nokuputsanya mitengo kwakavakirwa zvitengeswa uye kudiwa pamusoro exchanges. kukosha kwayo chaiwo kunoenderana nenhamba mari uye uwandu zvinhu uye mabasa kuti unogona kutenga nokuputsanya. Nokuputsanya ari kushingaira anosimudzirwa nyanzvi chikwata, izvo zvinoreva kuti kukurumbira uye mutengo cryptocurrency ichi inogona kuramba vachikura yekudyidzana.
Ethereum ari cryptocurrency akafanana Bitcoin uye hunobva Blockchain kurekodha Data pamusoro mari kwema. Ethereum Kazhinji kuva mukwikwidzi kuti Bitcoin, asi hazvo zvakadaro. Ethereum Michina inopa rakasiyana mukana. With Ethereum, unogona kunyora chero kutengeserana chero kunobatsira kunobva vakagovera Database kuti misa-mhando zvibvumirano kuti haambotauri zvetsika pamutemo zvesangano. Pachirehwa Yaunoti mabikirwo “ziva zvibvumirano”. Users wegadziriro kushandisa kuverenga kugona kwavo zvokushandisa kwerunyararo gadziriro – kuchera. Mutengo guru pamusoro Ethereum inobva kuvimba yaiswamo uye aumbwa kungotaurwa neboka pakuenzanisa zvitengeswa uye kudiwa pamusoro wemari exchanges. Hapana hofisi huru kuti anogona kuchinja mutengo wayo kana kukumbira vamwe kugamuchira mari iyoyo cryptocurrency. saka, kukosha chaiko currency kunoenderana nyaya zvinhu uye mabasa kuti inogona kutengwa ivo.
Ethereum / Bitcoin (PaEti / BTC)
PaEti / BTC chiratidzo kuti inoratidza mutengo Ethereum (paEti) pamusoro Bitcoin (BTC), kupfuura mukurumbira cryptocurrency; H. How zvikuru Bitcoin zvinotora kutenga imwe Ethereum. Ethereum, kana Eteri, ndicho chinonyanya kukosha cryptocurrency wechipiri nokuda capitalization. nyonyova, Ethereum ndiro zita nokuda blockchain pakakwirira, saka currency anowanzodanwa Eteri. Kuchikuva yakatanga akasikwa 2013, asi chete 2015, kana wakatanga kushanda. musiki wayo Vitalik Buterin, munhu wokuRussia Canadian Software yokuvaka. Bitcoin ndiye cryptocurrency anozivikanwa uye rinonyanya kushandiswa kuzivikanwa nhasi. Wakatanga wakabudiswa 2009. zvachose capitalization Its achangobva asvika $ 100B, kuita izvi-digital mari anokwezva mubhizimisi motokari. With Bitcoin faibha inokura kuti ive ethereum, paEti / BTC vachaparara. Asiwo, kana mutengo Ethereum rinokura nokukurumidza kupfuura Bitcoin, paEti / BTC ichamuka.
Litecoin ndiyo yechipiri pakukura tichitarisa digitaalinen mari mukurumbira uye digitalization, rinogona kutsiva Bitcoin. Inogona kushandiswa kubhadhara zvinhu uye mabasa uyewo kuva vakatsinhanisa nokuti chinyakare kana digitaalinen dzeEurope. Litecoin iri rakapa uye nekugadzirwa munhu decentralized User Network, izvo zvinoita hurumende murau mutengo kumonyanisa hazviiti nokuchinja mari zvitengeswa. Huwandu litecoins iri algorithmically parinoperera 84 miriyoni mari. Mutengo Litecoin hunoenderana badzi romugove uye kudiwa mwero uye chaizvoizvo pakutsvaga kuvimba ichi digitaalinen mari senzira muripo nhumbi uye mabasa. High volatility pamusoro Litecoin anopa mukana wakanaka kuita purofiti.
LTC / BTC chiratidzo inoratidza mutengo Litecoin (LTC) pamusoro Bitcoin (BTC), kupfuura mukurumbira cryptocurrency; H. Zvakadini Bitcoin zvaunoda kutenga Litecoin? Litecoin mumwe Bitcoin kuti nzira muripo uye inivhesitimendi mikana. Iyi mari digitaalinen riri pakati pamusoro 5 pashure chivharo. Unogona kuchinjanisa Litecoin nokuda BTC kana mari chaiyo uye kubhadhara zvinhu uye mabasa muzvitoro kuti kuvagamuchira sezvo muripo nzira. Bitcoin ndiyo inonyanya kufarirwa cryptocurrency kuzivikanwa saka kure. Wakatanga wakabudiswa 2009. zvachose capitalization Its achangobva asvika $ 100B, kuita izvi-digital mari anokwezva mubhizimisi motokari. Bitcoin uye Litecoin mitengo takatsunga ne Exchange uye kuvimba zvinobatsira digitaalinen Mari idzi sezvo muripo nzira. Sezvo Bitcoin rinokura nokukurumidza kupfuura Litecoin, LTC / BTC vachawa. Asiwo, kana Litecoin mutengo inokura nokukurumidza kupfuura Bitcoin, LTC / BTC vachaenda.
XRP ndiye digital mari kuti ndiyo chikamu ripple ezvinhu yakataurwa Ripple Labs. XRP haisi mukwikwidzi yeMharidzo cryptocurrencies akafanana Bitcoin kana Litecoin, sezvo ravakasikwa serimwe rinogona kutsiva mari chinyakare, apo ripple rudzi bhangi ezvinhu pamwe yayo mari. XRAP iri rakabudiswa Ripple Labs. Uwandu XRP ndiye 100B, nomumwe XPR chikwata akakamurwa 1M zvikamu anonzi “madonhwe”. XRP mutengo kuchinjai kwakavakirwa zvitengeswa uye kudiwa pamusoro EXMO Stock Exchange. zvisinei, Ripple Labs anogona kupindira kana Gengi nechakatsinhiwa. saka, XRP ndiye centralized nokudzorwa.
uye vazhinji zvimwe cryptocurrency maviri:
Currency / Bitcoin
Vara / Ethereum
OUMAMBO HWECHIPIRI / Bitcoin
OUMAMBO HWECHIPIRI / Ethereum
Cryptocurrencies Trading Libertex – kutanga